दुखद खबर : कोरोना भा’इरसका का’रण भारतमा एक नेपालीको नि’धन ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दुखद खबर : कोरोना भा’इरसका का’रण भारतमा एक नेपालीको नि’धन !
धनगढ़ी : सुदुरपश्चिम घर भइ हाल भारत बस्दै आएका एक पुरुषको कोरोना संक्रमणले निधन भएको छ । बझाङ जिल्ला को दुर्गाथाली गाउपालिका वोड़ा नम्बर २ घर भइ हाल भारतको बेङ लोरमा बस्दै आएका झन्डै ५० बर्षिय पुरुषको निधन भएको हो । परिवारका सदस्य ले दिएको जानकारी अनुसार उनको सोमबार निधन भएको हो । उनि मिर्गौला समेत का बिमारी थिए भने केहिदिन अघि मात्रै कोरोनको सन्क्र्मन रहेको पुस्टि भएको थियो । मृ’ तकका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । उनीहरु परिवार सहित भारतमा बस्दै आएका थिए ।
अर्को सामाचार , भारतमा कोरोना संक्रमितको दर हजारौँले घट्यो, निधन संख्या पनि घट्दो- काठमाडौं – भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ हजार ४८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि हिजो सर्वाधिक ५० हजारभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएकामा ४ हजार बढी संक्रमित घटेपछि ४६ हजारमा संक्रमण भएको वल्डोमिर्टसले जनाएको छ ।
वल्डोमिर्टसका अनुसार भारतमा कुल संक्रमित संख्या १४ लाख ८२ हजार ५०३ पुग्दा ९ लाख ५३ हजार १८९ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । हाल अस्पतालमा ४ लाख ९५ हजार ८६६ जनाको उपचार भइरहेको छ । त्यस्तै भारतमा कोरोनाका कारण हालसम्म ३३ हजार ४४८ जनाको निधन हु्ँदा पछिल्लो २४ घण्टामा ६३६ जनाको निधन भएको वल्डोमिर्टसले जनाएको छ । यसअघि सोमबार ७१४ जनाको निधन भएको थियो ।
काठमाडौँमा को’रोना स’ङ्कट भ’याभ’व हुन सक्ने, आईसीयू सङ्ख्या बढाउँदै सरकार